Ahoana ny fomba famoronana sy fandefasana hafatra mivantana avy amin'ny Samsung Galaxy Note 8 | Androidsis
Raha nanapa-kevitra ny handatsaka ny vola ianao ary hahazo Samsung Galaxy Note 8 vaovao, azo antoka fa te-hanatsara ny volanao ianao ary hampiasa ny ankamaroan'ny fiasa sy ny asany rehetra. ny "Hafatra mivantana" na "hafatra mivantana" dia endri-javatra tokana izay tianao.
ny Hafatra mivantana avela ianao mamorona hafatra an-tsary sy sary mampihomehy amin'ny alàlan'ny S-Pen. Avy eo ny app dia mamorona GIF alefany amin'ny contact anao izay mampiseho azy ireo ny fizotry ny famoronana iray manontolo, andao, toy ny hoe manoratra azy ianao amin'izao fotoana izao. Te hianatra hampiasa an'io fiasa io ve ianao?
1 Andao handeha miaraka amin'ireo hafatra mivantana
2 Ahoana ny fomba hamoronana hafatra mivantana amin'ny Galaxy Note 8
3 Ahoana ny fomba hizarana hafatra mivantana
4 Avereno jerena ireo "hafatra mivantana" taloha
Andao handeha miaraka amin'ireo hafatra mivantana
ny Hafatra mivantana ny Samsung Galaxy Note 8 dia manolotra anao, tsy ho hitanao izany amin'ny fampiharana manokana ary tsy mila misintona zavatra fanampiny ianao hanombohana mampiasa azy ireo manomboka amin'ny iray minitra. Ny sisa hataonao dia esory ny S-Pen izay hanokatra ho azy ny hitsin-dàlana amin'ny efijery hampiasanao azy ary hisafidy ny safidy mifanaraka amin'ny "Live Messages". Amin'ity hetsika ity dia hisokatra ny efijery vaovao izay hanananao izay rehetra ilainao mba hamoronana ireo hafatra mivantana.
Ahoana ny fomba hamoronana hafatra mivantana amin'ny Galaxy Note 8
Voalohany indrindra esafidio ny karazana kapoka tianao eo amin'ireo telo misy izay misy ink, glitter ary iray hafa misy sparkles na sparkle. Azonao atao koa mifantina ny hatevin'ny kapoka sy ny lokony. Tsara raha betsaka ny safidy, ary azo antoka fa hisy izany amin'ny ho avy, na dia tsy maintsy hanao izay misy aza isika izao.
Vantany vao voafidy ny safidinao, dia manomboha manoratra na manorata eo amin'ilay toerana natokana ho azy. Misy ihany koa safidy ahafahana manao izany manaova sary izay tianao. Tsindrio fotsiny ny safidy "Background" ao amin'ny faritra avaratra ambony amin'ny varavarankely ary safidio ny loko na sary iray. Tohizo ny fanoratana sy / na ny fanaovana sary toy ny mahazatra.
Ahoana ny fomba hizarana hafatra mivantana
Raha vantany vao nahavita ny hafatrao na ny zavakanto kanto nataonao ianao, dia azo inoana fa te hizara izany amin'ny namanao, olona iray ao amin'ny fianakavianao, mpiara-miasa aminao ... Araka ny ho hitanao dia zavatra tsotra be izany. Ny sisa ataonao dia kitiho eo amin'ny zoro ambony ambony avy eo am-baravarankely Messages mivantana, izay ilazanao fa nahavita nanoratra ianao na nanoratra ny hafatrao. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana "Mizara". Tsindrio ity bokotra ity ary afaka misafidy ny fomba tianao hizarana ity sarimiaina GIF ity izay novokarina.
Avereno jerena ireo "hafatra mivantana" taloha
Araka ny efa noeritreretinao azy dia hiala daholo ireo hafatra mivantana noforoninao mitahiry ao amin'ny galerianao amin'ny fomba ahafahanao mijery azy ireo isaky ny tianao. Ary mazava ho azy, afaka mampiasa indray ianao ary mizara azy ireo indray.
Ho fanampin'izay, Samsung dia nanisy hitsin-dàlana ho an'ity galeriana ity izay hitanao mivantana ao amin'ny fikandrana Live Messages. Atombohy ny fiasa araka ny nohazavainay teo am-piandohana ary kitiho eo amin'ny zoro ambany ambany izay ilazany zavatra toy izany "Fanangonana". Eto no ahitanao ireo zavaboarinao taloha rehetra.
Ho an'ireo izay mbola tsy zatra ity fitaovana ity dia mampahatsiahy anao izahay fa, taorian'ny fijaliana niaretan'ny teo alohany tamin'ny taon-dasa, ny Galaxy Note 8 an'ny Samsung no phablet farany natombok'ilay goavambe teknolojia Koreana Tatsimo izay, ankoatr'izay, dia nanana fanekena tsara, raha tsy any Chine, izay nisy azy io nokianin'ny mpanao gazety, ary izany na eo aza ny zava-misy iray amin'ireo finday avo lenta lafo indrindra amin'izao fotoana izao ary, tsy isalasalana, ny lafo indrindra amin'ny isan'ny Samsung natomboka hatreto.
Anisany ireo fiasa lehibe Ny fisongadinana dia ahitana ny efijery Super AMOLED Infinity Quad HD (6.3 x 2960) 1440 miaraka amin'ny tahan'ny 18.5: 9, ny processeur Snapdragon 835 an'ny octa-core, ny 6 GB RAM, ny 64/128/256 GB fitehirizana, ny fanamarinana Bluetooth 5.0, IP68 , Fakan-tsary roa MP 12, bateria 3.300 mAh, fifandraisana WiFi, NFC, USB Type C, S-Pen
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba famoronana sy fandefasana hafatra mivantana avy amin'ny Samsung Galaxy Note 8